Ford Motor Company inokudza BorgWarner neWorld Excellence Award
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ford Motor Company inokudza BorgWarner neWorld Excellence Award
BorgWarner, mutungamiri wechigadzirwa chepasi rose ari kuendesa zvigadziriso zvemusika wemotokari, akazivikanwa semutengesi anoita zvepasirese pamakwikwi e23 epagore eFord World Excellence Awards. BorgWarner yakaziviswa seyakakunda Gadzira Inofanirwa-Kuve Zvigadzirwa nhasi paFord Motor Company chiitiko chaicho.
BorgWarner, mutungamiri wechigadzirwa chepasirese ari kuendesa zvigadziriso uye zvinogoneka zvekufamba kwemusika wemotokari, akazivikanwa semutengesi anoita zvepasirese pa23.rd Gore negore Ford World Excellence Awards. BorgWarner yakaziviswa seyakakunda Gadzira Inofanirwa-Kuve Zvigadzirwa nhasi paFord Motor Company chiitiko chaicho.
"Tine rukudzo kugamuchira iyi World Excellence Award yeBattery Electric Vehicle Integrated Drive Module kubva kune yedu yenguva refu mutengi Ford," akadaro Frédéric Lissalde, mutungamiri uye CEO, BorgWarner Inc. "Kuzivikanwa uku kunoratidza kushanda nesimba uye kuzvipira kwechikwata cheBorgWarner. inoisa mukuona kuti matekinoroji edu akachena uye anoshanda ndeemhando yepamusoro uye anozadzisa zvidikanwi zvekufamba zvazvino neramangwana.
"Ford Motor Company's World Excellence Awards inocherekedza vatengesi vedu vari kuita zvepamusoro pasirese nekubatsira kuunza chirongwa cheFord +," akadaro Hau Thai-Tang, mukuru wechigadzirwa chikuva uye anoshanda basa. "Vatengesi vakaita seBorgWarner ndivo kiyi yekuenderera mberi kweFord sezvo isu tichiwedzera masimba ekuvaka hunyanzvi hutsva uye kupfumisa ruzivo rwevatengi."
Honorees vanozivikanwa nekuwana mazinga epamusoro epasi rose mumapoka anosanganisira:
Yekutanga mhando mbiru mibairo - Bata Vatengi SeMhuri, Shandura Kutenderera Kwemotokari Kushanda uye Kwikwidza Senge Challenger, Gadzira Unofanira-Kuva Nezvigadzirwa.
Kusiyana-siyana uye kusanganisirwa mibairo kune vatengesi vanokunda mukubatanidza siyana musangano ravo uye bhizinesi maitiro.
Sustainability mibairo kune vatengesi vanovandudza nharaunda yebhizinesi
Goridhe neSirivha Hunhu mibairo yevatengesi kugadzira nzvimbo dzinoratidza hukuru hwemhando, kuendesa uye mutengo wekuita gore rese.